Taariikhda alle ha u naxariistee Generaal Salaad Gabayre kadiye | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Taariikhda alle ha u naxariistee Generaal Salaad Gabayre kadiye
Salaad Gabayre waxa uu ku dhashay Degmada Xarardheere sanadkii 1933 .
Salaad Gabayre Kadiye waxa uu ahaa Soomaali ka tirsanaan jiray Militarigii waddankiisa intii u dhaxeysay 1950-nadii ilaa 1970-nadii.
Waxa uu ahaa xirfadle aad loogu tababaray ciidannimo, gaar ahaan xeeladaha militariga.
Frunze Academy oo ahaa dugsi ciidan oo ku yaala magaalada Mosco dalka Ruushka ayuu Salaad Gabeyre kusoo qaatay tababar ciidan. 14 sarkaal oo ugu horeeyay oo tababar Militari loogu qaado Taliyaaniga ayuu ka mid ahaa 1950-aadkii. Bilado aqoonsiya oo uu xirfad wanaagiisa ciidanimo ku qaatay ayuu ka helay Ciidamada Qaranka Soomaaliyeed (SNA).
Afgambigii Militari ee uu Soomaaliya uga noqday madaxweyne Generaal Maxamed Siyaad Barre ayuu ahaa ninka abaabulay qorshaha afgambiga.
Waana tan keenta in loogu yeero Aabihii Kacaanka 21-ka October, kaasoo markii dambe ay dad badan u qaateen inuu ahaa Maxamed Siyaad Barre ninka saxda ah ee ahaa Aabihii Kacaanka 21-ka October ee sanadkii 1969-kii.
Generaal Salaad Gabayre Kediye waxa uu ka mid noqday koox uu Madaxweynihii Militariga ahaa, Maxamed Siyaad Barre, ku eedeeyay “Isku Day Afgambi” 2 sano waxaan ka badneen kadib la wareegitaankiisii hogaanka Soomaaliya.
Taas waxa ay keentay In Salaad Gabeyre Kediye la xiro, laguna xakumo dil toogasho ah isaga iyo rag kale oo iyana lagu eedeeyay in wax kala maleegayeen afgambigaas.
1954-kii ayuu tababar ciidan kusoo qaatay dalka Taliyaaniga, halkaas oo loola qaaday 14 sarkaal oo kale, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen Allaha u naxariistee Gen. Maxamed Faarax Caydiid iyo gaashaanle sare Cabdullaahi Yuusuf Axmed iyo Generaal Jaamac aw Muuse samatar .
1956-kii waxa uu tabar kale oo ciidan u tagay dalka Ruushka, halkaasoo markii uu kasoo noqday kadibna la dalacsiiyay yacni Waaya-aragnimada iyo Shaqada .
1954-kii waxa uu tababar ciidan kusoo qaatay dalka Taliyaaniga, halkaasoo markii uu kasoo laabtay uu door firfircoon ka qaatay shaqadii Militariga Soomaaliya.
1964-kii waxa uu hogaamiyay dagaal Militariga Ethiopia looga saaray Tog Wajaale, oo ay qabsadeen.
1969-kii Waxa uu hogaamiyay Afgambigii Militari ee uu ciidanku ku qabsaday Soomaaliya 21-kii October ee sanadkaas.
Salaad Gabayre Kediye July 1972-kii ayuu Taliskii Militariga ahaa ee Soomaaliya toogtay, kadib markii lagu soo eedeeyay in uu wax ka maleegayay Afgambi ay dowladdii xiligaas sheegtay in looga maroogsan rabay xukunka. Taas waxa ay keentay in Generaal Salaad Gabayre Kediye halkaasna lagu soo afjaray noloshiisii oo dhan. Markii la dilay Salaad Gabayre waxaa la xiray xubno badan oo reerkiisa ka tirsan, hanti ay reer Gabayre lahaayeena qaasatan Guri uu lahaa dowladda ayaa la wareegtay kadibna Salaad Gabayre waxaa lagu Toogtay Fagaaraha Iskul Buluzia .
Salaad Gabayre Dilkiisa ayay dad badan qabaan in ay u sahashay inuu Maxamed Siyaad Barre 19 sano oo kale sii maamulo Soomaaliya, oo laga si weyn looga baqo.
Previous articleMaxaa ka soo baxay Kulankii Daba Geed iyo Odaayasha Balad weyne
Next articleMusharax Madaxweyne Thabit Abdi Maxamed oo nasiib daro ku tilmaamay Dagaalka Balad Xaawo
Dadka ajaanibta ah iyo Soomaalidaba ee kunool dalka Koonfur Africa, ayaa ka cabanaya dhibaatooyin kala duwan oo kasoo gaara dadka u dhashey dalkaasi. Muddooyinkii u...
Maxaa ka jira in muuqaalka Dubbe la duubay xalay Saqdii dhexe?
Dilka goor dhawayd ka dhacay Isgoyska Carwo Itko ee magaalada Muqdisho...
Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden oo ku baaqay in la dajiyo...
Wabiga Shabeelle ee Mara Degmada Baladweyne oo Biyo Yareeyay
Madaxweyne Biden oo shegay in 4 July dadka Mareykanka ka xoroobi...